MusicJoyMedia.Com :: ‘कृ’को दुई दिनको कमाई कति ?
‘कृ’को दुई दिनको कमाई कति ?
लामो समय पछि नायक अनमोल केसी अभिनित चलचित्र ‘कृ’ प्रदर्शनमा आएको छ । ओपनिङ सुखद रहेको र शनिवार पनि अधिकांश हलहरू हाउसफुल रहेको थियो । समिक्षक र दर्शकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको ‘कृ’ले दुई दिनमा करिब २ करोड बढीको कमाई गरेको छ । प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चलचित्रले पहिलो दि देशभरबाट ९७ लाख ३ सय ७५ रुपैयाँ कलेक्सन गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै शनिवारको दिन १ करोड ६८ लाख ५३ हजार २ सय ३३ रुपैयाँको ग्रस कलेक्सन गरेको छ । पहिलो दिन कृले उपत्यकामा ६१ लाख १३ हजार ५ सय ६३ र मोफसलबाट ३५ लाख ८६ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँको कमाई गरेको थियो भने दोस्रो दिन राजधानीबाट १ करोड ४ लाख ९६ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ग्रस हुँदा मोफसलबाट ६३ लाख ५६ हजार ९ सय ३६ रुपैयाँ बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ ।